प्रशान्त तामाङ लाई बंगाल सरकारले प्रहरीको जागिरबाट बर्खास्त गर्यो (२०७४ श्रावण २, सोमवार)
दार्जिलिङ निवासी नेपालीभाषी गायक प्रशान्त तामाङ प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त भएका छन्। गायक तामाङलाई बंगाल सरकारले कलकत्ता प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गरेको हो।
सन् २००७ मा तामाङ इन्डियन आइडल बन्नु अघि नै कलकत्ता प्रहरीमा थिए।
एक बंगला दैनिकलाई उदृत गर्दै सिक्किमबाट प्रकाशित हाम्रो प्रजाशक्ति दैनिकले २ हप्ता अगाडिको बिहीबारको अंकमा तामाङ सेवाबाट बर्खास्त भएको खबर छापेको छ ।
उक्त समाचारमा तामाङ लामो समयदेखि जागिरमा गयल भएको जनाइएको छ। तामाङलाई विभागले १३ जुनमा कारण देखाऊ सूचना जारी गरेको पनि त्यस समाचारमा उल्लेख छ।
तर पछिल्लो समय दार्जिलिङमा नेपालीभाषी र सरकारबीच चलिरहेको द्वन्द्वबारे प्रशान्तले सरकारको विपक्षमा बोलेको कारण उनलाई प्रहरी पदबाट बर्खास्त गरिएको खबरहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्।
दार्जिलिङमा नेपालीभाषीले गरेको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन मा केही समय अगाडि तामाङले समर्थन जनाएका थिए। उनले आफ्नो सफलतामा दार्जलिङवासीको पनि हात भएको र उनीहरुको मातृभूमिमा लाठी बर्सिएको आफूले देख्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
उनले भनेका थिए, मलाई निकै दुःख लागेको छ, दार्जिलिङ युद्धभूमि वा युद्ध बोर्डर हो र ? गोर्खाल्याण्ड मागको आन्दोलन रोकिने छैन। तपाईंको मातृभूमिमा लाठी लाग्दा के तपाईं चुप लाग्नुहुन्छ र?
उनले गोर्खाल्याण्डको माग जायज भएको भन्दै बंगाल सरकारको विपक्षमा बोलेका थिए।
यही कारण उनलाई बंगाल सरकारले अनुशासन पालना नगरेको भन्दै कारवाहीका रुपमा प्रहरीको जागिरबाट बर्खास्त गरेको समाचारमाध्यमले जनाएका छन्।
प्रशान्त तामाङले इन्डियन आइडल जितेपछि नेपालमा नै गीत गाउने र फिल्म खेल्ने काममा सक्रिय छन्।
सानिको साडि फरररर
कलाकार संघ जस्तो साझा घरले अवार्ड गर्नु राम्रो होइन: सुदर्शन गौतम
बलिउड नायक संजय दत्त जेलबाट रिहा भएपछि बलिउडमा पुनरागमन गर्ने तयारीमा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कलाकारलाई दिए दिवाभोज
आर्यन र नम्रता उत्कृष्ट अभिनेता/अभिनेत्री
बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अहिले दौडमा
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस नेपालमा पनि मनाईयो
नारीप्रधान चलचित्र लाग्यो कीर्तिपुर: विद्यार्थी
संगीतकार अम्बर गुरुङलाई राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने
वरिष्ठ संगीतकार अम्बर गुरुङको निधन
वरिष्ठ संगीतकार अम्बर गुरुङको स्वास्थ्य पुनः गम्भीर
थुप्रै बलिउड फिल्ममा काम गरेका हास्य अभिनेता रज्जाक खानको निधन
अर्घाखाँची ढाकावाङ्गकी सरुको 'भन्देऊ तिम्रो रोजाईमा म' सार्वजनिक
"पिरतीको गाउँमा" म्युजिक भिडियो सार्बजनिक ! मोडलिङमा रामु खनाल
भद्रगोलका सितेबाले धुर्मुस सुन्तलीलाई ५० हजार १ रुपैयाँ दान दिए
अर्घाखाँची जुकेनाका गायक खुम राज घिमिरेको नयाँ हास्य व्यंग्य गीत स्वास्नी पोइल गइ सार्वजनिक
पूर्णकला बिसी र बिमल परियारको "हाम्रो दिन त आउदै आएन" लोक गीतको म्युजिक भिडियो सार्बजनिक
गायक उदित नारायण झालाई भारत सरकारद्वारा पद्म भूषणले सम्मान
वर्ष २०७२ का थोरै सफल चलचित्र सफल
अश्मि श्रेष्ठ मिस नेपाल- २०१६
« previous12...567891011...3738next »